MY REMEMBRANCE: အိမ်သာရေ ပြန်သောက်တဲ့ နိုင်ငံလား???
Posted by puluque at Thursday, June 25, 2009
ဂျပန်ကနေ ရေတစ်ပတ်စာသယ်လာရမှာလား..း)
၀န်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် စသောက်ပြခဲ့တယ် မဟုတ်လားကွယ်။ သူတောင် သောက်သေးတာပဲ။
(ဒါပေမယ့် ဟို ဆေးကျောင်းမှာ စာသင်တဲ့ ဟာသလို ဖြစ်နေဦးမယ်။ ဆရာလုပ်တဲ့လူက dead body ရဲ့ စအိုထဲ ထည့်လိုက်တာ လက်ခလယ်၊ သူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တာက တခြားလက်ချောင်း ဆိုတာလို...)
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သောက်ရတော့မှာပေါ့
ရောမရောက် ရောမလိုပဲ ကျင့်ရတော့မှာပေါ့လေ။
Civil နဲ့ ကျောင်းပြီးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီက ကြားရတာတော့ မျိုးစုံပဲ။ NEWater ထဲမှာ ယောက်ျားလေးတွေ အတွက် မသင့်တော်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်ခု ပါတယ်လို့ တစ်ယောက်က ပြောတယ်။ နောက်တစ်ယောက် ကတော့ NEWater စက်ရုံကို လေ့လာရေးသွားတော့ ရေတွေသန့်စင်တာကို တိုက်ရိုက် ဗွီဒီယို ရိုက်ပြတာကို ကြည့်ရင်း အဲဒီအထဲမှာ အမျိုးသမီးသုံး ဂွမ်းထုပ်ကြီး ပါလာတာတွေ့တော့ လေ့လာရေး လာတဲ့သူ အားလုံး စိတ်ညစ်သွားကြတယ်လို့ ပြန်ပြောပြဖူးတယ်။
အမှန်တော့ ကျနော်တို့သောက်နေတဲ့ရေတွေကရော ဘာထူးတုန်းဗျာ... မြေကြီးထဲက ရတဲ့ရေပါပဲ။ အဲဒီစွန့်ပစ်ရေဆိုတာလဲ မြေကြီးထဲ ဝင်သွားတာပဲလေ ပြောမယ်ဆို ဘာမှ မထူးဆန်းပါဘူး။ နိုင်ငံအတော်များများက သဘာဝက ရတဲ့ရေ သောက်တယ် စလုံးက သဘာဝကမရတော့ ကြံဖန်ပြီး လုပ်သောက်တယ် ဒါပါပဲ
ကျနော်တို့ အထက်ကျောင်းမှာ တုန်းက ဘိုင်အိုမှာလား မသိဘူး သင်ခဲ့ရတယ်လေ သံသရာလည်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည်ရင် သဘောပေါက်မှာပါ။ တခုတော့ ကွာသွားတာပေါ့လေ၊ ဒီဟာကြီးက နာမည်တော့ဆိုးတာပေါ့ဗျာ ဒီတော့ သောက်ရမဲ့သူကခပ်တွန့်တွန့်ဖြစ်တာ ပေါ့ဗျာ.. ဟားဟား နောက်ဆို စလုံးကလူတွေကို ... .............ပြောတော့ပါဘူးဗျာ တော်ကြာ ဝိုင်းဆဲနေမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ် အဟီးဟီးဟီး အေးရာအေးကြောင်းပဲ နေတော့မယ်။
သုံးပြီးသားရေ သန့်စင်ထားလို့သာ လူတွေက တမျိုးဖြစ်နေတာပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ဧရာဝတီမြစ်ရေကို ဒီလိုပဲ အနည်ထိုင်ပြီးသောက်ခဲ့ကြတာလေ။ သိတဲ့အတိုင်းမြစ်ရေ ဆိုတာ ဘယ်လောက်သန့်လဲဆိုတာ...
ဒါပေမယ့် အဲဒီရေက အရသာအရှိဆုံးပဲ...
သိတော့ သိပေမယ့် ဒီလောက်ကြီး တော့ မသိထားဘူး...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ နိုင်ငံမှာ နေ ဒီရေ မှ မသောက်ရင်..ဘယ်လို လုပ်မလဲ.ကျို ချက်ပြီး ပြန်သောက်ရင်ရောဟင် .. ခုတော့ အဲ့လို သောက်နေတယ်..အိမ်မှာရော ရုံးမှာရောပေါ့..း
စင်ကာပူလာလည်မလားလို့ စိတ်ကူးထားတာ ရေသောက်ရမှာကြောက်လို့ စဉ်းစားနေတယ်...
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မသိတာလေးတွေ သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ.... ma mie nge
good post, :D i like it :D
ဟီးးးး ရွံသွားပြီး မသောက်တော့ပါဘူး.. ဟီး စကားမစပ် ဘီယာကကော အဲ့ဒီရေတွေနဲ့လုပ်ထားတာလား ရေအစား ဘီယာလေး ပြောင်းသောက်မလားလို့း) စဉ်းစားတုန်း ဟူး မောလိုက်တာ ရေခဲသေတ္တာထဲက ရေယူသောက်ဦးမှ (အထင်မကြီးနဲ့ ရေပိုက်ကရေတွေ အေးအောင် ထဲ့ထားတာ သားကတော့ ဒီလိုသောက်နေတာပဲ ) ဂလု ဂလု ဂလု...
ဗဟုသုတပွား အကျိုးများစေတဲ့ ပို့စ် တစ်ခုပါ အစ်ကိုရေ ... ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်ကြားဖူးနေတာတော့ ကြာပါပြီ ... ဂဃနဏကို ခုမှ သိရတာပါ ... သောက်တာတော့ သောက်ပါ အစ်ကိုရာ .. but ဂလု ဂလွတ်နဲ့တော့ မမြည်ပါနဲ့နော် ... စိတ်ထဲ တစ်မျိုးကြီးပဲ .. အဟီး :D
အိမ်သာရေသောက်လားဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ သောက်ပါတယ် :P မသောက်လည်းမသောက်ပါဘူး .. :D
Pu Lu yay,
This post is very knowledgable.
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်လိုက်တာ ဗဟုသုတတွေအားကြီးရသွားတယ်